Lush magazine ၂နှဈပွညျ့ မှာ အလနျးစားဖကျရှငျနဲ့တှရေ့တဲ့ခမျြးမငျးရဲထှဋျ – Media9
နိုငျငံတောအကြိုးပွုဇာတျကား အခုမှစရိုကျဖူးတာပါ။ နိုငျငံတျောအကြိုးပွု ရဲတပျဖှဲ့ဂုဏျပွုကားမို့လို့ကနြျောလကျခံလိုကျတာပါ။
မိဘက သရုပ်ဆောင်လုပ်ဖို့ ဖိအားပေးတာမျိုးမရှိပါဘူး
နိုင်ငံတောအကျိုးပြုဇာတ်ကား အခုမှစရိုက်ဖူးတာပါ။ နိုင်ငံတော်အကျိုးပြု ရဲတပ်ဖွဲ့ ဂုဏ်ပြုကားမို့ လို့ ကျနော်လက်ခံလိုက်တာပါ။
မောဒြယပြေါကစြ background dancer ကကတညြးက ကိုစိုငြးကိုသဘောကတွယြ….
January 23, 2020 media9
[Unicode] “ကိုစိုငြးကလူတှရေဲ့အာရုံကိုအပှည့အြဝသူ့ဆီရောကအြောငလြုပနြိုငစြှမြးရှိတဲ့တကယ့အြနုပညာဂုရုကှီးတဈယောကဆြိုတော့ ဒီလိုကာလအရှညအြကှာရိုကရြမယ့အြခါမွိုးမှာ သူ့ဆီကအမွားကှီးသငယြူခှင့ရြမယလြို့အမွားကှီးမွှောလြငထြားတယလြို့”ပှောပှခဲ့တဲ့ ‘အေးမှတသြူ’. [Zawgyi] “ကိုစိုငျးကလူတှရေဲ့အာရုံကိုအပွညျ့အဝသူ့ဆီရောကျအောငျလုပျနိုငျစှမျးရှိတဲ့တကယျ့အနုပညာဂုရုကွီးတဈယောကျဆိုတော့ ဒီလိုကာလအရှညျအကွာရိုကျရမယျ့အခါမြိုးမှာ သူ့ဆီကအမြားကွီးသငျယူခှငျ့ရမယျလို့အမြားကွီးမြှျောလငျထားတယျလို့”ပွောပွခဲ့တဲ့ ‘အေးမွတျသူ’…
ဒါရိုကျတာ မိုကျတီးရဲ့အမှုကို Eleven Media Group က ကအြေေးပေး
January 22, 2019 media9
[Zawgyi] ဒါရိုက်တာ မိုက်တီးကို စွဲဆိုထားတဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) အမှုကို Eleven Media Group က ကျေးအေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ မိုက်တီးကို ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) နဲ့ တာမွေမြို့နယ် တရားရုံးမှာ Eleven Media Group က အမှုဖွင့်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ ဒါရိုက်တာ မိုက်တီးဟာ ထောင်ဒဏ် ငါး နှစ်ကနေ ၁၀ နှစ်အထိ ချမှတ်နိုင်တဲ့ မူးယစ်ပုဒ်မ ဖြစ်တဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကို ပြောင်းလဲစေတတ်သော ဆေးဝါးများဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၆ (ဂ) နဲ့ တာမွေမြို့နယ် တရားရုံးမှာ တရားရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ [Unicode] ဒါရိုကျတာ […]
Star Awards ဆုပေးပှဲမှ ရနျသူရုပျရှငျဇာတျကား နှုတျထှကျ
January 17, 2019 media9
[Zawgyi] မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆု အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲလိုမျိုး အနုပညာရှင်တွေရဲ့ ပန်းတိုင်တစ်ခုဖြစ်လာမယ့် Star Awards ဆုပေးပွဲကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီနှစ်အတွင်းမှာ အထူးခြားဆုံးနဲ့ ပထမဆုံးကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပြီလ ၅ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်း ၈၃ ကားမှ ဇကာတင် ဇာတ်ကား ၂၁ ကားကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ ထူးချွန်ဆု ၁၈ ဆုပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေစင်ဦးရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးက ရိုက်ကူးထားတဲ့ ရန်သူရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ နေမင်း၊ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်နဲ့ နေခြည်ဦးတို့ အဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပြီး ထိုရုပ်ရှင်ကားကြီးဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ထဲမှာရုံတင်ပြသခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ရန်သူရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ Star Awards ဆုပေးပွဲကနေပြီး နှုတ်ထွက်ပါတယ်လို့ ယနေ့ ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့ က ရွှေစင်ဦးရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာကနေ ကြေငြာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကြေငြာချက်ထဲမှာတော့ “Star […]
ဇာတျလမျးတှဲတှေ ဆကျတိုကျရိုကျကူးနတေဲ့ ခါရာ